Ngwọta Ọhụrụ na gburugburu ebe obibi na nchekwa nchekwa sara mbara | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNgwọta Ọhụrụ na nke Enyi na Enyi na Nchekwa Ohere
06 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Isi akụkọ, Mgbasa ozi, Turkey
ngwọta ọhụụ na gburugburu ebe obibi maka nchekwa nke mpaghara mepere emepe
Nchekwa gburugburu ebe obibi dị ka mkpa nchekwa nke ụlọ ọha na eze, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ebe a na-ewu ụlọ na ogige. Sistemu nchedo ihe dị ka ogige nchekwa gburugburu ebe obibi, ihe mmetụta dị n'okpuru ala ma ọ bụ ihe mmetụta nwere mgbidi, ihe ntụgharị, radar, mgbochi, nke nwere ike ịdị iche iche dabere n'ọhịa iji chọpụta njedebe anụ ahụ nke mpaghara ndị ahụ pụrụ iche ma ziga ịdọ aka ná ntị dị mkpa na mpaghara nchịkwa. .
Taa, mkpa maka nchebe gburugburu ebe obibi nke oke dị ka osisi ụlọ ọrụ, obere ụlọ ọrụ, obere ụlọ ọrụ, isi ụlọ na ụlọ na-abawanye. A bịa na izu ohi ma ọ bụ mebie nke onwe, usoro nchekwa gburugburu ebe obibi bụ ihe mbụ na-abịa.
Igwe nchedo ihe eji eche nche gburugburu nke ihe nchedo gburugburu ya, ihe mmetụta n ’ala ala ma ọ bụ ihe mmetụta a na-etinye n’elu mgbidi, ihe mmetụta na-agagharị, radar na mgbochi mgbochi na-enyere aka imepụta usoro mmezi karịa site na ijikọ ya na sistemụ ndị ọzọ. Site na ijikọ ya na igwefoto na mpaghara metụtara, a na-atule foto nke mpaghara ahụ mebiri emebi na ndị na-ahụ maka etiti na-akpaghị aka, ka onye ọrụ ahụ ma ọ bụ onye ọrụ ahụ wee hụ foto ozugbo.
Na Sensormatic, gburugburu ebe obibi gị adịghị nchebe!
Sensormatic, nke na-ewepụta ihe ngwọta maka mpaghara dị iche iche na mkpa dị na teknụzụ nchekwa, na-adọta uche ya na ngwa ọhụrụ yana ngwa enyi na gburugburu ebe nchekwa na mpaghara nchekwa gburugburu. A chịkọtara usoro nchekwa Sensormatic nche n'okpuru isi anọ: ịdọ aka ná ntị waya esemokwu, olili, nsu na sistem radar.
Sistemụ ịdọ aka na ntị
Usoro a na-enyocha ntinye na ikike na-enweghị ikike na mpaghara a kapịrị ọnụ ma na-enye nchebe zuru oke site na ijikọ na sistemụ nlere vidiyo IP na sistemụ nchịkwa ịnweta. Site na ngwanrọ ya, sistemụ ahụ na-enye ohere nkwukọrịta data ozugbo na sistemụ nchekwa ndị ọzọ na netwọkụ.
Sistemula Nche imlọ Egwu Nke Atụrụ; O nwere eriri elektrọnik nke eriri anya, ọ na-achọpụta mkpọtụ n'okirikiri. N'ụzọ dị otu a, sọftụwia nke dị na etiti nwere ike rụtụ aka kpọmkwem mpaghara ebe mkpu sitere. Mmetụta ụdọ akwara dị n'okpuru ala nwere ike ịmata ọdịiche dị na nrụgide mmadụ na ugbo ala na-emetụta mmadụ. Ya mere, a na-egbochi mkpu ụgha.
Radars na ọrụ nke nchekwa…
Radars, nke pụtara na ụlọ ọrụ nchekwa, okporo ụzọ, mpaghara meteorology na ọdụ ụgbọ elu abụrụla otu n'ime ihe nchekwa nchekwa gburugburu ebe obibi maka ọnụ ahịa ha nwere ike ịnweta onye ọrụ njedebe. Ugbu a, enwere ike ịnwe ihe egwu dị na Njirimara nke onwe, ọdụ ụgbọ elu, ebe data na mpaghara oke ala mgbe radar dị n'ihu. Radars, nke na-ekpebi ọsọ, ụzọ na ọnọdụ nke ihe site na iji ebugharị redio na-enyocha mpaghara ahụ, na-arụ ọrụ na ebumnuche nchekwa.
N'adịghị ka usoro nchekwa ndị ọzọ, usoro a nwere ike ịrụ ọrụ na ike anyanwụ, ọkachasị na mpaghara buru ibu na ngwa ogologo oge n'ọhịa nke ọkụ USB na-akwụ ụgwọ. Usoro ndị a na-azọpụta ike na-eme ka ahụ dị mfe na oge maka nrụnye na ntinye ọrụ.
A na-ahọta ihe mkpuchi ihe mgbochi ihe mgbochi site na ikike ha ịrụ ọrụ na gburugburu ọgba aghara. -35 ka + 70 ogo nwere ike ịrụ ọrụ na mpaghara ọ bụla, ma maka mpaghara ala dị iche iche, yana mpaghara ndị nwere oke ọdịiche dị n'etiti ehihie na abalị na-enye ezigbo ngwọta. Ojiji nke ike anyanwụ na-enye nchebe na-adigide na-enweghị mkpa maka ike ọzọ, ọbụlagodi na mba ndị Nordic dị n'akụkụ mkpanaka. Ọ bụrụ na eriri ahụ gbajiri ma ọ bụ gbajie n'oge ọ bụla, ọ na-aga n'ihu na-enye nchekwa site na eriri ọzọ maka ndozi ma ọ bụ nnọchi.
Ngwaahịa ndị a, nke na-enyekwa ohere itinye aka na sistemụ nlere vidiyo, na-egosi onye ọrụ ya ọnọdụ ebe mkpu ahụ na maapụ ụlọ akwụkwọ. Ọ na - akpalite igwefoto kacha nso na ebe mkpu malitere, na - ewetara onyonyo a n'ihe nlele nke onye ọrụ ahụ. N'ụzọ dị otu a, a na-egbochi njehie ndị ọrụ na-akpata ma na-etinye aka na ngwa ngwa.
Ọrụ Nchebe Sensormatic
Sensormatic, nke na-eje ozi dị ka onye isi nke ụlọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, bụ igwe ihe ndozi teknụzụ nke dị na ya ga-eme ka azịza ya nwere onwe ya dabere na mpaghara yana mkpa. 25 nso ọkachamara na-arụ ọrụ na Retail na 300 ụlọ ọrụ dị na Turkey, Aviation, Government na Justice, Banking na Finance, Commercial & Industrial, Energy, Health, Education, lọjistik, egwuregwu, njem na ile ọbịa ebe nche na arụmọrụ arụmọrụ kpọmkwem eme azịza nke teknụzụ. Ihe ngwọta Sensormatic bụ; O mejuputara teknụzụ ohuru na ntanetị dịka nlele vidiyo na ụzọ njikwa njikwa, usoro biometric, sistemụ nchekwa gburugburu, nchọpụta ọkụ na ngwọta mkpu, ihe nlere elele elektrọnik, RFID na usoro nyocha ụlọ ahịa, usoro mmadụ na-agụta ọnụ, wired na ngwọta netwọọkụ ikuku.
Ụgbọ bọmbụ na-eme egwuregwu na-amalite na Diyarbakır
Banyere Malatya's Eco-Friendly Trambus Sistem…
Ndị ọrụ ga-ekpebi ụcha nke ụgbọ ala enyi na enyi
Alstom na-enye Ngwọta Ndị Kwesịrị Ntụkwasị Obi na Ndị Bara Uru
Opel Special Financial Solutions site na TEB Cetelem na PSA Finans
Ngwọta ndị ọzọ na-eme ka okporo ụzọ okporo ụzọ na Ankara
Enwe Mmasị na Mpaghara Ndị Azụmahịa na Istanbul New Airport
sistemu nche nche
okirikiri nchedo oke gburugburu
Kinglọ akụ na ego
Ọha na ikpe
mgbochi mgbochi mousa
Azụmaahịa na Industriallọ ọrụ aka
n'okpuru elu sensọ ngwa anya